Imbaleki yekati ye-Arabia Mau | Amakati eNoti
Ikati yohlobo IsiArabhu mau Yinzalelwane entle enoboya baseArabhiya ethi, nangona ingekaziwa ncam, kancinci kancinci yenza isifotho kumakhaya abantu baseNtshona abanekati.
Imbonakalo ebonakalayo, le feline intle iyathanda ukubaleka kwaye idlale, kodwa uyakonwabela nokuba liziko lokuqwalaselwa lomntu wakho omthandayo.
1 Imvelaphi kunye nembali ye-Arabia Mau
4 Ukunyamekela iArabia Mau
4.5 Uthando kunye nenkampani
5 Lithini ixabiso le-Mau yesiArabhu?
6 Iifoto zekati yase-Arabia Mau
Imvelaphi kunye nembali ye-Arabia Mau
IArabhu Mau Luhlobo lwekati oluvele ngokuzenzekelayo kuMbindi Mpuma, apho wayehlala yedwa de iindawo zokuhlala zabantu zaba ninzi. Xa oko kwenzekile, i-feline yaqonda ukuba ingafumana ukutya simahla kwindawo apho iimeko zokuphila zingalunganga kakhulu, kunye nenkampani.
Kancinci kancinci, ilahlekile kwezinye izinto zookhokho bayo ngenxa yokuwela nezinye iintlobo zeekati ezivela kwezinye iindawo zomhlaba. Nangona kunjalo, ayizange yaziwe kude kube ngo-2004, xa umfuyi uPeter Mueller eqala ukukhetha iikati. Emva kweminyaka emi-4, Uhlobo olufunyenwe liQumrhu leNkati yeHlabathi (WCF).
Le yikati ene Umzimba owomeleleyo, onemisipha kunye neembaleki onobunzima obuphakathi kwe-4 kunye ne-6kg. Intloko ijikelezwe imilo, inesinqe esichaziweyo kunye neendlebe ezikhulu, ezingoonxantathu. Imilenze yomelele, yenziwa ukuba ikwazi ukuhamba imigama emide.
Idyasi igudile, kwaye inokuba mdaka, ngwevu, kunye namachokoza.. Umnyama nomhlophe zamkelwe kuphela ukuba akukho mabala. Inobomi obulindelekileyo kwiminyaka eli-14.
I-Arabia Mau iyakuthanda ukwenza umthambo. Sisilwanyana esinokuthi, nangona sinokuziqhelanisa nokuhlala kwiflethi, uyakuhlala ngcono kwindlu enepatio okanye igadi Apho unokuziva khona amavumba ahlukeneyo kwaye ube nezinto ezahlukeneyo ezinokubangela iflethi. Yintoni egqithisile, ukrelekrele kakhulu kwaye unokuba nenkani, ukuze afundiswe amaqhinga ukuba ukuphatha ikati kusetyenziselwa ukumonwabisa.
Ukuba uhlala ekuhlaleni njengenjana, kuya kuba lula kakhulu kuye ukuba ahambisane nezinja kunye nezinye iikati.
Ukunyamekela iArabia Mau
Kuphephe ukubondla ngeesiriyeli. Oku, ukungakwazi ukwetyiswa ngokuchanekileyo yikati, kunokubangela iingxaki ezinje nge allergies. Ke ukuba siyigcina le nto engqondweni, eyona nto ibikukunika ukutya okungenazinkozo, okanye ukutya okuziinkozo, kwaye ezo zityebi kwiprotheni yezilwanyana.
Ngapha koko, ukuba unethuba lokufuna iingcebiso kwisazi sezondlo esiqondayo ukutya kwendalo kwefelines, ungathandabuzi ukumnika iBarf. Umzimba wakho uya kukubulela ngayo.
Ukucoceka kwekati kufanelekile kubalulekile ukwenza izinto ezininzi: brasha iinwele zakhe yonke imihla, ucoce amehlo akhe neendlebe xa kukho imveliso ethile, kwaye gcina ibhokisi yakhe yenkunkuma icocekile kwaye isuswe umchamo kanye okanye ngaphezulu ngemini, kwaye itreyi iya kucocwa kakuhle ngamanzi kunye nesitya sokuhlamba izitya.
Ngokunjalo ngokunjalo zama ukubeka umondli kunye nomseli kude kangangoko kunokwenzeka kwibhokisi yakho yenkunkuma, ngesizathu esilula: awukuthandi ukutya ngelixa unuka ilindle lakho. Ngale ndlela, eyona nto ifanelekileyo kukutya namanzi kwigumbi elahlukileyo kulelo le-WC yakho.
Uhlobo lwe-Arabian Mau aluchazelwanga kwizifo eziphambili, ngaphandle kwezo zinokuba nazo naziphi na ezinye izilwanyana. Kodwa sithetha ngesidalwa esiphilayo, ke ubomi bakho bonke unokugulaYiyo loo nto ukutyelela rhoqo ugqirha wezilwanyana kubalulekile. Kuya kufuneka uye kuye uyokumtofa xa kukho imfuneko, kwaye umthene xa ungazimiselanga ukumzala.
Kufuneka wenze umthambo kakhulu yonke imihlaKe ngoko, kubalulekile ukuba unikele ixesha elininzi ngangokunokwenzeka ukuze udlale naye ukuze akwazi ukutshisa amandla akhe.
Nika uthando yonke imihla, kodwa ewe, ngaphandle kokukhathaza okanye ukumcinezela. Thatha ixesha elincinci usuku ngalunye ukuqonda ulwimi lwabo lomzimba. Oku kuya kwenza ulwalamano lwakho lube ngcono. Zama ukumnika iinkonkxa zokutya okumanzi okanye ukuphatha ikati kumaxesha ngamaxesha ukuze umonwabise.
Kananjalo kuya kufuneka umgcine enkampanini, uzame ukumenza aphile njengentsapho.
Lithini ixabiso le-Mau yesiArabhu?
Ngaba ujonge amaxabiso ekati yama-Arabia Mau? Ukuba impendulo yakho iyangqinwa, kufuneka uyazi malunga 600 euro ukuba ifunyenwe kwindawo yokuqandusela. Kwimeko apho ufuna ukuyithenga kwivenkile yezilwanyana zasekhaya, iya kukubiza imali encinci, malunga ne-300-400 euro.
Kodwa khumbula ukuba ikati kufuneka ubuncinci iinyanga ezimbini ubudala, kuba ngaloo ndlela iya kulunyulwa kwaye iya kuba sele iqalile ukutya ukutya okuqinileyo.
Iifoto zekati yase-Arabia Mau
Ikati yama-Arabia Mau inembonakalo engaqhelekanga eya kukwenza uthandane kwangoko. Ngesi sizathu, besifuna ukuncamathisela ezinye iifoto ukuze uzijonge:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Imbaleki yekati ye-Arabia Mau
Molo, Enkosi ngenqaku!
Sinekati kaMau Arabe eyamkelwe eDubai ebuye nathi eSpain. Inkcazo kweli nqaku izaliseka phantse kule leta.
Kuyabonakala ukuba kukho intetho ethi isishwankathela isimilo salezi kati: "ukuba awukwazi ukufumana inja, fumana iMau." Ukuba awukwazi ukuba nenja, yamkela iMau.
Singathanda ukudibana nabanye abanini beMau (isiArabhu, isiJiphutha) eSpain
Ndiyakuvuyela ngekati 🙂